यी हुन् दाँतका ८ शत्रु खाद्यपदार्थ, सेवनलगत्तै अवश्य मुख कुल्ला गर्नुहोस् – Health Post Nepal
यी हुन् दाँतका ८ शत्रु खाद्यपदार्थ, सेवनलगत्तै अवश्य मुख कुल्ला गर्नुहोस्
२०७६ असार २३ गते १०:३३
हामीमध्ये धेरै कुनै न कुनै प्रकारको दाँतको समस्याबाट पीडित भइरहेका हुन्छौँ । तर, ठूला असाध्य रोगबारे सजगता अपनाइरहेका हाम्रो प्राथमिकतामा दाँत स्वास्थ्य भने कमै मात्र परेको हुन्छ । दाँतका समस्यालाई सामान्य रूपमा लिएर बेवास्ता गर्दा कालान्तरमा हामीले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । दाँतको समस्या केवल मुखमा मात्र सीमित रहने नभई गिजाको रोग बल्झिँदा मुटुरोगसम्म निम्तिन सक्नेतर्फ धेरैको ध्यान गएको हुँदैन । दाँतका अधिकांश समस्या हामीले आमरूपमा खाने खाद्यवस्तुका कारण निम्तिने गर्दछन् । यदि हामीले दाँतका लागि अहितकर वस्तुको सेवनमा नियन्त्रण राख्यौँ वा त्यस्ता वस्तुको सेवनका क्रममा र सेवनपछि थोरै मात्र पनि सावधानी अपनायौँ भने हामी धेरै हदसम्म आफ्नो दाँतलाई स्वस्थ राख्न सक्छौँ । त्यसका लागि हामीले दाँतका लागि अहितकर खाद्यवस्तु र तिनको सेवनको स्वस्थकर तरिकाबारे जान्नु आवश्यक छ ।
१. सावर क्यान्डी
यो कुनै नौलो कुरा होइन कि, क्यान्डी तपाईंको मुख तथा दाँतका लागि हानिकारक छ । सावर क्यान्डीमा विभिन्नखालका एसिड हुन्छन्, जसले दाँतमा कठिनाइ पैदा गर्छन् । यिनीहरूलाई चपाउनुपर्ने हुनाले यसले दाँतलाई लामो समय असर गरिरहन्छ र दाँतलाई क्षय गराउन सघाउँछ । यदि तपाईं चकलेटको पारखी हुनुहुन्छ भने तत्काल चपाउन सकिने चकलेट खानुहोस् र मुख कुल्ला गरिहाल्नुहोस् ।
दाँतमा समस्या आइरहन्छ भने ब्रेड खानुपूर्व दुईपटक सोच्नुहोस् । तपाईंले ब्रेड चपाउँदा दाँतको स्यालिभा स्टार्चमा परिणत भई सुगर बन्दछ । ब्रेडका स–सना टुक्राले दाँतको बीचमा अड्केर क्याभिटी बनाउँछन् । तपाईं कार्बोहाइडे«टको अत्यन्तै पारखी हुनुहुन्छ भने कम रिफाइन गरिएको होलग्रेन रोज्न सक्नुहुन्छ । सजिलै नटुक्रिने र कम सुगर भएका खाद्यान्न रोज्न सक्नुहुन्छ ।
हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, अल्कोहल स्वास्थ्यका हिसाबले फाइदाजनक छैन । तर, के तपाईंले अनुभूत गर्नुभएको छ, जब तपाईं ड्रिंक्स गर्नुहुन्छ, तब तपाईंको मुख सुक्खा हुन्छ ? मुख सुक्खा हुँदा स्यालिभा कम हुन्छ, जुन तपाईंको दाँत स्वस्थ राख्न आवश्यक हुन्छ । स्यालिभा तपाईंको दाँतमा अड्केको खाना निकाल्न र सफा गर्न सहयोगी हुन्छ । ड्रिंक्स गरिसकेपछि तपाईंको दाँतलाई ओसिलो राखिरहन प्रशस्त पानी पिउने तथा कुल्ला गरिरहने गर्नुहोस् ।
४. कार्बोनेटेड ड्रिंक्स
एक रिसेन्ट अध्ययनले देखाएको छ कि, अत्यधिक सोडाको प्रयोगले तपाईंको दाँत पूर्ण रूपमा ड्यामेज गर्छ । यसले मुख सुक्खा पनि बनाउँछ । साथै, कडा रङको सोडाले तपाईंको दाँतको रङ फिका बनाउँछ । सोडा खानासाथ तत्काल दाँत ब्रस नगर्नुहोस्, यसले दाँतलाई नराम्ररी क्षति पुर्याउँछ ।
यद्यपि, आइसमा पूर्ण रूपमा पानी हुन्छ, तर पनि अमेरिकन डेन्टल एसोसिएसनका अनुसार साह्रो कुरा, धेरै चिसो कुरा खानु दाँत बिग्रने प्रमुख कारण हो । आफ्नो पेयपदार्थमा आइस मिसाए पनि त्यसलाई हत्तपत्त नचपाउनुहोस् ।
सुन्तला, अंगुर, कागती, यी सबै फलफूल तथा जुसका रूपमा खान स्वादिष्ट हुन्छन्, साथै भिटामिन सीले भरपूर हुन्छन् । तर, त्यसमा पाइने एसिडले इनामेल नष्ट गर्नुका साथै दाँतलाई हानि गर्छन् । पानीमा कागती निचोरेर खानु पनि दाँतका लागि हानिकारक हुन्छ । साथै, साइट्रसबाट प्राप्त एसिडले मुखमा पीडा पनि हुन्छ । यदि तपाईं ती फलफूलबाट एन्टिअक्सिडेन्ट प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने धेरै कडा होइन, केही मात्रामा सेवन गर्नुहोस् र पानीले मुख कुल्ला गरिहाल्नुहोस् ।
७. पोट्याटो चिप्स
आलु चिप्स खाँदा धेरैले सन्तुष्टि मान्छन् । यसमा अत्यधिक स्टार्च हुन्छ, जुन चिनीका परिणत हुन्छ र दाँतको बीच भागमा अड्किन्छ, जुन ब्याक्टेरियाको कारक बन्दछ । चिप्सबाट उत्पन्न हुने एसिड लामो समय दाँतमा रहिरहन्छ । त्यसैले चिप्स खाएपछि राम्रोसँग मुख कुल्ला गर्न नबिर्सनुहोस् ।
८. ड्राई फ्रुट्स
हामी सबैले सोच्ने कुरा हो, ड्राई फ्रुट्स स्वस्थ स्न्याक्समा पर्छ, जुन सत्य पनि हो । तर, धेरै ड्राई फ्रुट्स, जस्तै एप्रिकोट, प्रन, फिगम, एसिनजस्ता स्टिकी फ्रुट्स दाँतमा अड्किने र समस्या उत्पन्न गर्नेखालका हुन्छन् । यदि तपाईं ड्राई फ्रुट्स खान रुचाउनुहुन्छ भने मुख राम्रोसँग कुल्ला गर्ने र ब्रस गर्ने गर्नुहोस् ।